Arrimaha la filayo in lagaga Hadlo shirka Berri ka furmaya Magaalada Kampala | Salaan Media
Home Wararka Arrimaha la filayo in lagaga Hadlo shirka Berri ka furmaya Magaalada Kampala
Muqdihso:3-aug-2013(SM)Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafti uu hogoominayo, ayaa ayaa u duulay magaalada Kampala ee dalka Uganda, iyadoo ay halkaasi kaga sii horrayso wasiirkiisa Arrimaha Dibadda Fowziyo Yuusuf Xaaji.
Ujeeddada madaxweynaha ayaa ah sidii uu uga qeyb gali lahaa kulan maalinta berito ah ka furmaya magaalada Kampala ee dalka Uganda, oo ay ka qeyb galayaan madaxweynayaasha Afrikaanka ah ee Ciidamadoodu ay Somalia joogaan.
Haddaba kulankan oo aan illaa iyo Hadda si rasmi ah loo shaacin arrimaha lagaga hadlayo, ayaa warar hoose oo soo baxayaa ay sheegayaan in lagaga hadli doono qaar ka mid ah qodobaddani.
Khilaafka u dhexeeya Ciidamada Kenya iyo Xukuumadda somaliya:.
Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya waxaa ka taala dacwaad qoraalkeeda wasiirka arimaha dibadu ay u gudbisay midowga Africa, taasi oo ku aaddan in ciidamada Kenya ay Kismaayo ka fulinayaan arrimo dowlada Somaliya aanay raali ka aheyn, waxana la filayaa in arrintaa si xoog leh loogu gorfeeyo.
Sidoo kale ciidamada Kenya waxaa laga gudbiyay qoraal ah in ciidamadaasi ay la safteen mid kamid ah beelaha dega gobolada Jubbooyinka, waxaana shirka ka furmaya Kampala la filayaa in lagu lafo guro arimahaasi.
Dowlada Uganda ayaa sheegtay in haddii ciidamada Kenya waxyaabaha ay ka wadaan Soomaaliya ay joojin waayaan uu fashilmi doono howlgalka loogu magac daray AMISOM, islamarkaana Uganda ay go’aansan doonto in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya.
Maadaama Dawladda Uganda ay lacago adag ku hesho hawgalkeeda ay ka waddo somaliya, waxa ka go’an inay meesha ka saarto wax kasta oo ay u aragto inay caqabad ku yihiin arrimaheeda.
Shirkan oo saddexda maalmood soconaya waxaa laga yaabaa in laga soo saaro go’aan kama dambeysa ah oo ku aadan arimaha Kismaayo iyo ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbooyinka.
Ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbooyinka ayaa sidoo kale waxyaabaha loo heysto waxaa kamid ah dhoofinta dhuxusha oo sharci daro ah oo la sheegay inay si toos ugu lug leeyihiin.
Arrintan dhuxusha ayaa ah bar hal bawle u ah shaki ay xukuumadda somaliya ka qabto inay hawlaheedii ay u gacan togaalaynayso Dawladda Kenya, waxana si aad ah loo dhawrayaa inay arrintaa miiska soo saarto.